कुकुर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्थानीय सरकार - Saptakoshionline
कुकुर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्थानीय सरकार
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र ०४, २०७५ समय: १६:५९:३५
सडक क्षेत्रमा छाडा रुपमा घुम्ने जनावरहरुका कारण भएका दुर्घटनाबाट समय समयमा मानिसहरुले ज्यान समेत गुमाउने गरेका छन । सडक क्षेत्रमा फिरन्ते रुपमा घुम्ने जनावरहरुले मानिसहरुको ज्यान लिने मात्र हैन यदाकदा आफनो ज्यान समेत गुमाउने गरेका छन । दैनिक जसो सडक प्रयोग गर्दा स
डकको विचमा यात सडक किनारामा मृत अवस्थामा देखिने जनावरहरुले यो कुराको पुष्टी गर्दछन । सडक क्षेत्रमा मृत अवस्थामा देखिने जनावरहरुमा कुकुरको संख्या अधिक हुने गरेको छ ।
सडक क्षेत्रमा हुने दुर्घटनाहरुको तथ्यांकलाई हेर्दा छाडा चौपायाहरुलाई व्यवस्थित गर्न नसके यिनीहरुका कारण सवारी दुर्घटना बढ्ने अवस्था रहेको छ । छाडा रुपमा सडक क्षेत्रमा देखिने र मृत भेटीने चौपायामा कुकुरको संख्या उल्लेखिय हुने गरेको छ । केही वर्ष अघि सम्म स्थानिय निकायले कुकुर मार्ने अभियान नै चलाउने गरेका थिए तर केही वर्ष यता देखि पशु अधिकारका कुरा उढ्न थालेपछि कुकुर मार्ने काम गर्न छोडिएकोे छ । कुकुरको संख्या दिनप्रतिदिन बढी रहेको छ । त्यसैले पनि सडक क्षेत्रमा अर्ध पाल्तु जस्ता रुपमा रहने छाडा कुकुरहरु सडक सुरक्षाका लागि चुनौति बन्न थालेका छन त्यस तर्फ सम्वन्धीत निकायहरुको ध्यान पुगेको देखिदैन । सडक सुरक्षामा जिउँदामा मात्र हैन मरेका कुकुरहरुले समेत चुनौति थपि रहेका छन । सडक तथा सडक किनारामा मरेका चौपायाहरु व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कसको हो ? मलाई थाहा छैन तर स्थानिय सरकारले आफनो क्षेत्रमा अरुले नगरे गर्नु पर्ने कर्तव्य भने हो भन्ने लाग्छ मलाई । सडक क्षेत्रमा मरेका पशुहरुलाई त्यसै छोढ्नु हुदैन भने वहस चलाउन सहज होस भनेर कलम चलाइएको हो ।
उत्तानो परेर दुर्गन्ध फैलाउदै सडक प्रयोगकर्ताहरुलाई जोखिम बढाउने काम सडक क्षेत्रमै मरेका कुकुर र अन्य चौपायाहरुले गरिरहेका हुन्छन तर तिनीहरुको व्यवस्थापनको खै किन हुदैन ? म पनि दैनिक इनरुवा इटहरी आवतजावत गर्ने गर्दछु प्राय सबै दिन सडकका विभिन्न ठाउँहरुमा यसरी मरेका पशुहरुको दुर्गन्ध सुग्नु नपरोस भनेर नाक थुनेर मोटरसाईकल चलाउने गर्दछु । मोटरसाईकल चलाउदै गर्दा नाक थुन्न एउटा हात प्रयोग गर्दा जोखिम बढ्ने मैले अनुमान गरेको छु सायद तपाईले पनि अनुभव गर्नु भएको होला ? सडक सुरक्षाका क्षेत्रमा काम गर्ने, स्थानिय तहले मात्र हैन स्थानियवासी र सडक प्रयोगकर्ताहरुले समेत त्यस तर्फ ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । विच सडकमा हुने यस्ता जनावरहरुलाई जोगाउन र नाक थुन्दा कहिले काही समस्या हुने गर्दछ । सडक मुलुक र जुन ठाउँमा जस्तो अवस्थामा हुन्छ त्यस ठाउँको पहिचान समेत हो । यि सडक क्षेत्रहरु हामीले मात्र हैन अन्य मुलुकबाट आउने आगन्तुकहरुले समेत प्रयोग गर्ने हुँदा सडक क्षेत्रका दृष्यहरुले अन्तराष्ट्यि क्षेत्रमा समेत राम्रो र नराम्रो प्रभाव पार्ने हो । समय समयमा हाम्रा नेताहरुले गर्ने सडक सुधार र सडक सुरक्षाका कुराहरु सुन्दा उनीहरुले विकसीत मुलुकका सडकहरु देखेर प्रभावित भएछन अनि हाम्रो ठाँउमा पनि केही राम्रो गर्दछन की भन्ने लाग्छ । चुनावी मुद्धा पनि सडक क्षेत्रको सुरक्षा र स्तरोन्नतीका कुरा पनि पर्ने गरेका छन । स्थानिय तहको निर्वाचनको समयमा धेरै ठाँउमा नेताहरुले सडकको विषयलाई मुद्धा बनाएका थिए । पुर्वको व्यस्त र चौरस्तामा रहेको इटहरी क्षेत्रको सडकको चर्चा स्थानिय तहको निर्वाचनको समयमा धेरै भएको थियो । तत्कालिन एमालेले यसलाई चुनावि मुद्धा समेत बनाएको थियो , अहिले त्यही एमाले (नेकपा) को नेतृत्वमा इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका रहेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रका सडकमा मरेका चौपायाहरुको व्यवस्थापनको काम कहिले देखि थाल्छ भनेर इटहरीवासीले कहिले सम्म चिन्ता र चिन्तनको विषय बनाइ रहनु पर्ने हो ?